UKENDRICK LAMAR WENET EFANELEKILEYO, UMFAZI UWHITNEY ALFORD, ABANTWANA - IINDABA
Ngubani uKendrick Lamar?
U-Kendrick Lamar Duckworth wazalwa nge-17 kweyeSilimela ngo-1987, eCompton, eCalifornia e-USA, kwaye eyona nto idla ngokubizwa ngokuba ngumbhali weengoma nowabhala iingoma owasungula ii-albhamu ezinje ngeGood Boy, ISixeko saseMAD kunye nePimp iButterfly. Ubungcali bakhe budunyiswa kuyo yonke imithombo yeendaba kwaye, kuyo yonke imisebenzi yakhe, lo rapper uye wafikelela kwelona liphezulu kwiitshathi zehlabathi.
Ke ngoku usisityebi kangakanani uKendrick Lamar njengasekuqaleni kuka-2018? Ngokwimithombo egunyazisiweyo, le mvumi inexabiso elikwi-intanethi elixabisa i-18 yezigidi zeedola, eqokelelwe kwiminyaka yakhe eyi-15 yobuchwephesha kwindawo esele ithethiwe malunga nommandla. Ngokwemithombo ethile, uKendrick mva nje uthenge ikhaya eCalabasas, California.
UKendrick ngunyana kaKenny Duckworth, olilungu leqela lemigulukudu elibizwa ngokuba ngabafundi beGangster eChicago, eIllinois, kwaye wabizwa njengewonga lomculi / umbhali wengoma uEddie Kendricks. Ngo-1995, eneminyaka esibhozo kuphela, uKendrick waqaphela izithixo zakhe, uGqr.Dre noTupac Shakur beqopha ividiyo yomculo yengoma yakhe ethi California Love, eyayingomnye wamaxesha abalulekileyo ebomini bakhe, kunye nokufunda kwakhe eMcNair Elementary, Kwaye nakwi-vanguard yokufunda intliziyo, ibekwe ngaphakathi kwiCommpton Unified School District. Njengomncinci, wafunda kwisikolo samabanga aphakamileyo i-Centennial esime kwisixeko esikhulu, kwaye wayengumfundi othe ngqo apho.
U-Kendrick waqala ukudlwengula esemncinci, kwaye eneminyaka eyi-16 kuphela wasungula i-mixtape yakhe, phantsi kwesihloko esithi Omncinci oyiNtloko ye-N * gga kwiCharge, esebenzisa isihloko seqonga u-Okay-Dot, kwaye wasungula esebenzisa iKonkrete Jungle Muzik, kwaye wafumana ukwamkelwa kweLamar phakathi ababukeli abaninzi bomthonyama. Emva koko watyikitya ukujongana neTop Dawg Entertainment, okwangoku ileyibhile yefayile entsha ye-indie ikakhulu eseCarson, California. U-Lamar waqala ukurekhoda kunye nabo kwi-2005, kwaye wasungula i-mixtape eneengoma ezingama-26 phantsi kwesihloko soSuku loQeqesho. Kwiminyaka elandelayo, wasebenzisana nabarepha abahlukeneyo be West Coast, kunye noJay Rock kunye no Ya Boy, kwaye wayesisenzo somdlalo wegeyimu, igqala lase West Coast, kwaye phantsi kwesihloko esifanayo sika Okay-Dot, UKendrick waboniswa Iingoma zomdlalo ngokuhambelana noCali N * ggas kunye neCypha. Kwi-2008, wabonakaliswa kwiJay Rock's All My Life (KwiGhetto), ukongeza wabambisana noLil Wayne kunye no-Warner Bros. Records. Emva kwexesha, wenza ividiyo yokusebenza kakuhle komboniso kaCharles Hamilton, owamvumela ukuba aqonde ngakumbi kwilizwe le-rap.
U-Kendrick uvumile ukuba ubonakala ngathi ngumculi ngokufana noTupac Shakur, Jay Z, Nas, The Notorious Big kunye no-Eminem, kubandakanya ukuba phakathi kwabo, uShakur wayengoyena mntu ukhuthazayo kulo msebenzi wakhe nakwindlela yakhe yobomi. Ngo-2011 kudliwanondlebe noRolling Stone, wathetha ngoSnoop Dogg noMos, kwaye emva koko, wakhankanya i-rapper DMX njengenye yeempembelelo.
U-Lamar wabizwa ngokuba ngukumkani omtsha we-hip hop amatyeli aliqela, kwaye ubhekisa kuye kuba oyena rapper ulungileyo uyaphila, kunye nokumkani wase New York. Ethetha ngesimbo sakhe somculo esithandwa kakhulu, uLamar wakhankanya ukuba umculo wakhe awunako ukuhlelwa, uwuchaza njengomculo womntu, kubandakanya i-jazz, i-funk kunye nemibongo yamazwi athethiweyo kwiingoma zakhe.
Xa ibandakanya iinkolelo zokomoya zikaLamar, ungumKristu, owaguqula emva kokubhubha komhlobo onzulu, kwaye wayevulelekile malunga nenkolo yakhe, nganye kudliwanondlebe nasemculweni. Wabhaptizwa ngo-2013, kwaye ukusukela ngoko uye wadumisa uThixo ngempumelelo yakhe. Kwi-2014, wayenxibe njengoYesu Krestu ngeHalloween, eyichaza ngolu hlobo lulandelayo: Ukuba ndinqwenela ukukhonza nawuphi na umntu, andizukuyenza into eyoyikisayo, andizukuyenza enye igcisa okanye umntu ukuba — ndizakuthi ndenze isithixo iNkosi, endivakalelwa kukuba yiyo iNkosi, kwaye ndizame ukuhamba ngobumnene bayo.
Umdlalo weNkwenkwezi yoBusuku bonke weNkwenkwezi. https://t.co/7pKX7abYt5 pic.twitter.com/rnzNkwfjlY
-Kendrick Lamar (@kendricklamar) NgoFebruwari 11, 2018
Imeko yobudlelwane kunye neMidiya yokuNxibelelana
Xa ibandakanya ubomi bothando bukaKendrick, uye wabandakanyeka kwintombi yakhe ekudala ikho, uWhitney Alford ukusukela ngo-Epreli 2015, nangona kunjalo akukho lwazi luhlukeneyo loluntu ngokunxulumene nokuthandana kwakhe kwimbali eyadlulayo. U-Lamar unamandla kwimidiya yoluntu ngokuhambelana ne-Twitter kunye ne-Instagram, kwaye yamkelwe ngabantu abazizigidi ezili-10.5 kwisigidi sangaphambili nakwisithoba sezigidi.
Izigaba: Iindaba Hulu Tech-Iindaba
kwisiphelo semovie enzulu
apho kwafayelwa isibhakabhaka esikhulu
intshontsho livule ngokubulela
I-brandon armstrong dwts yamkelwe
Ixesha le-911 2 isiqendu 7